Siyaasi hawl-gab ka noqday QM oo hoggaminayo Hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM – idalenews.com
Mid ka mid ah Xiddigaha Siyaasadeed ee ugu caansan dalka Nigeria, Prof. Ibrahim Agboola Gambari ayaa lagu wadaa inuu hoggamiyo Guddi uu Ururka Midowga Afrika u xil-saarayo inay ka talo bixiyaan Deganaanshaha dalka Somalia.
Prof. Gambari oo muddo 12-sanno ka mid ah Hawlwadeennadda Afrikaanka ee xilalka sare ka soo qabtay Hay’adda QM, ayaa waxa uu dhawaan hawlgab ka noqonayaa Hawlihii QM oo uu muddo 12-sannadood ku soo guda-jiray.
Prof. Gambari waxa uu xilka Wakiilka Xoghayaha Guud ee QM iyo Midowga Afrika ee Nabad-ilaalinta Gobalka Darfur ee dalka Sudan (UN Mission in Darfur) hayey saddexdii sanno ee la soo dhaafay.
Sidoo kale, waxa uu noqday Wakiilka QM ee Arrimaha dalka Myanmar, wuxuuna Dhexdhexaadiye Caalami ka ahaa Wada-xaajoodkii Nabadda ee Dowladda Sri Lankii iyo Jabhaddii Tamil Tigers.
Prof. Gambari oo tan iyo sannadkii 1999-kii Hawlwadeen ka ahaa QM, waxa uu ammaan xooggan ka helay Xogahayaha Guud ee QM, Ban Ki Moon, Madaxweynayal iyo Ra’isul-wasaarayaal Dowladeed.
Siyaasigaasi, oo mar ahaan jirey Wasiirka Arrimaha Gudaha ee dalka Nigeria iyo Danjiraha Nigeria ee QM oo muddo 10 sanno hayey
Ilo-wareedyo uu soo xigtay Wargeyska Guardian ee Nigeria, ayaa lagu sheegay inay Madaxda Midowga Afrika u gacan haatiyeen Prof. Gambari, si aqoontiisa looga faa’ideysto Hawlgalka Ciiddamadda Nabad-ilaalinta ee Midowga Afrika ka wado dalka Somalia.
Siyaasigaasi Rug-caddaaga, ayaa lagu wadaa inuu madax ka noqdo Guddi isugu jirta Saraakiil Milliteri iyo Siyaasiyiin si ay dib ugu eegaan Istaraatijiyadda Hawlgalka AMISOM iyo sida ugu wanagsan ee Somalia loogu soo dabaali lahaa Deganaansho buuxda.
Dowladda Turkiga oo lacago ku taageeray hawlgalka Ciidamada AMISOM